Isitifiketi siqinisekisa umthamo webhethri we-Samsung Galaxy S9 ne-S9 Plus | Izindaba zamagajethi
Akunakwenzeka ukuthi izitifiketi, imibhalo nokunye ukuvuza mayelana ne-Samsung Galaxy S9 entsha okumele yethulwe ngenyanga ezayo ngaphakathi kohlaka lwe-MWC 2018, kungafinyeleli kunethiwekhi. Kulokhu sinokuvuza kwesitifiketi esivaliwe eBrazil, lapho ikhombisa ngokusobala umthamo wawo womabili amabhethri.
I-Samsung Galaxy S9 entsha ne-S9 Plus namuhla sekugxilwe kukho konke ukuvuza kwansuku zonke, ezinsukwini ezimbalwa ezedlule okunye ukuvuza kwafika nebhokisi langemuva ledivayisi futhi manje livela ku I-National Telecommunications Agency yaseBrazil, amandla asemthethweni afika futhi singasho ukuthi amabhethri aqinisekisile.
I-3.000 ne-3.500 mAh ye-Galaxy S9
Akubonakali ukuthi inkampani ifuna ukuzibeka engcupheni ngalolu daba lwamabhethri nangaphansi lapho isivele inomlando oshiye uphawu lwayo. Kulokhu imodeli I-S9 izofaka ibhethri lomthamo we-3.000 mAh nemodeli enkulu ye-Galaxy S9 Plus 3.500 mAh.
Kunamahemuhemu mayelana nokwenzeka kokungeza i-graphene ukukhulisa ukuzimela kwamadivayisi, kepha asikholwa ukuthi lokhu kuzokwenzeka esikhumulweni esibizelwe ukuba ngumholi kwezentengiso, mhlawumbe bazokufaka ngokuzayo noma nakumadivayisi aphansi njengesivivinyo ngaphambi kokuqalisa okokuqala- ulayini terminals. Okungenani, yilokho kubonakala.
Sisondela ekuboneni lezi zinhlobo ezimbili zenkampani yaseNingizimu Korea zethulwa ngokusemthethweni futhi kuyaqinisekiswa lokho ifemu ifuna ukubuyela ku-MWC bese yethula amatheminali ayo aphambili lapho ukuze ungalahlekelwa yintambo yonyaka omusha.
Ngalokhu sisho ukuthi isethulo senziwe ngaphambi kwesikhathi kunabaphikisi abaningi futhi ngokuhamba okungenzeka kwe-LG okubonakala kungazivezi imodeli entsha eBarcelona, ​​kuzohlala noHuawei njengembangi enkulu ekuqaleni kwe unyaka, uma kunjalo.naye wenza okufanayo kuMobile futhi akacabangi ngokuba nomcimbi wawo kanye namanye amahlebezi athi. Akukho lutho oluqinisekisiwe futhi kuzodingeka ukubona ukuthi ama-brand aphendula kanjani ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuqala komcimbi, kepha singachaza i-duel enhle yamadivayisi wale 2018.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Isitifiketi siqinisekisa umthamo webhethri we-Samsung Galaxy S9 ne-S9 Plus
Okufanele ungakuphutheli ku-Netflix ngenyanga kaJanuwari